kudityaniswe irayisi eqhutywa yinjini yedizili,Umatshini wokuchola irayisi
1.Lo matshini wenzala weerayisi uqokelele ukusebenzisa indlela ekhethekileyo yokondla
2.Olu hlobo lokuma mpela lomatshini wethu wokudibanisa irayisi unokugcina amaqondo asezantsi eshushu
3.Umatshini wokudibanisa wedreyini onesakhiwo esilula ,Kulula ukuba umsebenzisi atshintshe iindawo zokuphumla
4.ukudityaniswa kwerayisi kunokunciphisa izinga lokuphuka kwerayisi kunye nokwenza irayisi ibe mhlophe.
5.lo matshini we-VTSB werayisi wokugaya irabha esomeleleyo
6.yinto oluzenzekelayo VTSB series edityanisiweyo umatshini lokusila irayisi
8.Lo matshini wokudibanisa irayisi unokuqhutywa ngenjini yedizili
Iinkcukacha zeMveliso yomatshini wokugaya irayisi weVTSB
Umatshini wokugaya irayisi weVTSB unembonakalo entle, Isakhiwo esichaziweyo kunye nokusebenza okulula nokukhuselekileyo. Umatshini wokudibanisa irayisi odityanisiweyo usombulule ikakhulu iziphene zabanye oomatshini abafanayo, Njengomququ wecuba, Ungcoliseko lomoya kwindibano.Besides, Lo matshini wearhente yerayisi i-SB uxhotywe ngezixhobo zokufuya, Ukukhupha umququ kunye nomququ wokutyhoboza.Umatshini oxutywe nerayisi oxutywe ngokwawo unokuzahlula ngokwawo umququ kwirayisi egqityiweyo kwaye usebenzisane nephedi. irayisi husker,umatshini wearayisi wesiza ukuseta okugcwele isityalo selayisi. emva koko uqhubele phambili paddy kwirayisi egqityiweyo kube kanye .Ngoko imveliso egqityiweyo ineempawu ezilandelayo: ilayisi eninzi emhlophe,irayisi egqityiweyo emshushu enobushushu obuphantsi,Iinciniba ezingaphantsi ,Umququ, ukuphuma okuphezulu, ukusetyenziswa okuphantsi kwamandla, kwaye kulula ukugcina ucoceko lucocekile. Umatshini wokudibanisa irayisi odityanelweyo ngowona mshini wokulungisa irayisi wokucheba..
Iimpawu zomatshini wokudibanisa weerayisi odibeneyo
Lo matshini wenzala weerayisi uqokelele ukusebenzisa indlela ekhethekileyo yokondla ,ezona zinto ziphambili zokugaya zenziwa yirubler rol.it inokuphucula umthamo womatshini.
2.Isivuno esiphezulu sombona
Umatshini we-SB odityanisiweyo weerayisi unokufakwa kwiintlobo ezahlukeneyo zerhasi paddy.include irayisi ebukhali kunye nerayisi ejikelezileyo.Rubber roller kunye ne-iron roller inokudibanisa .
3.Ubushushu obuphantsi bokugaya
Olu hlobo lme nkqo lomatshini wokudibanisa irayisi unokugcina amaqondo obushushu asebenza ngendlela.
4.Umgangatho ophantsi wokuqhekeka
Xa kuthelekiswa nomatshini omnye wokudibanisa intsimbi,i-paddy emva kokuqengqeleka kwerabha,iya kuba yinto eninzi yokucoca iinyithi.
5.Irabha erabha yerhasi
Inkqubo yokujikeleza kabini yokuphucula ubomi beenkonzo zokudityaniswa kwerhasi .I-roller rolling inokucoca ulusu oluntsundu kwaye umqulu wentsimbi unokutsala kunye nelayisi emhlophe. Inkqubo yokuqhubekeka kwinkqubo enye yokudlula irayisi..
Umatshini wokuchola irayisi ubeka irayisi kwimngxunya yokutya,emva koko irayisi emhlophe kunye nomququ ziya kuphuma kwindawo eyahlukeneyo ethengiswayo.emva kokuba kudluliswe isidanga sokwenza irabha kunye nokuqengqeleka ngentsimbi ,irayisi kunye nomququ zazingaphandle ngeendlela ezahlukeneyo.
7.Kulula ukubuyisa indawo eseleyo
Umatshini wokudibanisa wedreyini onesakhiwo esilula ,Kulula ukuba umsebenzisi atshintshe iindawo zokuphumla .
8.Iidizili ziqhuba irayisi
Idiesel yerayisi inokuqhutywa ngedizili ,injini ye-petroli ,injini yombane .diesel injini kunye nepetrol injini yomatshini weerayisi umatshini ofanelekileyo kwiindawo apho umbane ungafumanekiyo.
Umgaqo-siseko wokusebenza komatshini wokudibanisa irayisi odityanisiweyo
Okokuqala i-paddy ithululelwa kwi-hopper yokutyisa yomatshini wokugaya udibaniso, kwaye ahlukanisiwe ukusuka kwisunds ngongcungcuthekiso. Emva koko i-paddy ecociweyo idlula ngesixhobo somazibuthe ngokusebenzisa ibhodi yokukhanya yehipper yokususa isundries, emva koko zithwalwa ngumqengqelezi wokondla usiya kwiiruble ezimbini zerabha yokuqengqa. Umatshini wokudibanisa i-flux we-SB umatshini wokudibanisa irayisi uhambisa isantya sokondliwa. Ukuqengqeleka okukhawulezayo kunye nokujikeleza okujikelezayo okujikelezayo kubuye umva ngokwahluka kwe-3.6mps yesantya somgca, kunye nokujikeleza kwabo ngesantya esilinganayo 1:1.35. Izinga le-husking lingaphezulu 95%, Ukucaca phakathi kweerolitha ezimbini kulungiswa ngumlungelelanisi wokucaca. Emva kokuqhawula, Umququ ovuthuza uvuthuza umququ kumxube ophuma ngaphandle koomatshini. Ipali ebalekayo iphuma kumatshini odibeneyo weerayisi ngokusebenzisa ipaddy paddy, kunye nerayisi emdaka ingena kwigumbi lokugaya lokugaya, okokugqibela iphuma kwindawo yokukhupha irayisi njengokugqitywa kwerayisi.
Kwinkqubo VTSB irayisi umatshini lokusila umatshini, Isantya esiphezulu soxinzelelo somoya siphefumlela umoya ngaphakathi kumngxunya wombhobho ophambili ukuze sipholise igumbi lokugaya kwaye siqinisekise ukuba irayisi egqityiweyo icacile kwaye iyaqaqambile, ephukile kancinci, kwaye bawenze amakhoba akhuphe kakuhle. Isixhobo esisetyenzisiweyo kufuneka sisondele kwindawo ekukhutshelwa kuyo irayisi kwaye sihlengahlengise ubumhlophe belayisi, Umququ ococekileyo ugxothiwe ngaphandle kumatshini wokuchiza wedayi wedizili ngokusebenzisa ipore ye hexagon sieve.
Iiparamitha zobugcisa zomatshini wokudibanisa irayisi odityanisiweyo
Umzekelo VTSB5 VTSB10 VTSB30
Ubungakanani be-Rubber roller
ividiyo yomatshini wokudibanisa irayisi
Qhagamshelana nathi ngomatshini wokugaya irayisi weVTSB